Wararka Maanta: Axad, Sept 15, 2013-Wafdigii Puntland uga Qayb-geli lahaa Shirka New Deal oo Brusells Maalinta berri ah ka frumaya oo Halkaas Gaaray
Axad, Sebtember 15, 2013 (HOL)- Wafdi uu horkacayo madaxweynaha Puntland C/raxmaan Sheekh Maxamed (Faroole) ayaa maanta gaarey xarunta dalka Biljamka ee Brusells, halkaasoo uu berri ka furmayo shirka New Deal ee looga hadlayo sanadkan dib-u-dhiska dalka Soomaaliya.
Wafdiga madaxweyne Faroole waxaa ku jira xubno ka tirsan golaha wasiirrada Puntland kuwaasoo uu qayb ka yahay wasiirka caafimaadka Dr. Cali C/laahi Warsame iyo saraakiil ka tirsan madaxtooyada.
Sidoo kale waxaa wafdiga Puntland kamid ah C/risaaq Cismaan Juurile oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, kana soo jeeda Puntland iyo Maxamed Xasan Barre oo isna guddoomiye u ahaa guddigii kumeel gaarka ahaa ee doorashooyinka Puntland.
Ergeyga gaarka ah ee Midowga Yurub u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michele Cervone d'Urso ayaa wafdiga madaxweyne Faroole kusoo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee Brusells.
Dhinaca kale wasiirka war-faafinta Puntland Axmed Sheekh Jaamac oo maanta la hadlay war-baahinta maxalliga ah ee Puntland, ayaa sheegay in Puntland ay shirka uga qayb geleyso si madax bannaan, isagoo xusay in ay casumaad rasmi ah ka heshay Midowga Yurub.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in Puntland ay shirka la tegi doonto ajendeheeda gaarka ah iyadoo ka madax bannaan Dowladda Federaalka, islamarkaana uu Madaxweyne Faroole shirka ka jeedin doono khudbad dhinacyo badan taabaneysa.
Shirka New oo sanadkan ay ka qayb gelayaan madaxda ka socota in ka badan 50 dal iyo ururro caalami ah, waxaa lagu falanqeyn doonaa xaaladda dalka Soomaaliya iyo sidii dib-u-dhis loogu sameyn lahaa, iyadoo dhinaca kale lagu wado in shirkaas Soomaaliya dhaqaale badan loogu ballan qaado.